Faras qabyo ah iyo noocyadooda ugu wakiilka ah | Fardaha Noti
Farasyo ​​qabyo ah ayaa kuwaa ah shaqo loo isticmaalay awoodeeda weyn ee jarjarka awgeed. Dhaqan ahaan waxaa loo isticmaali jiray shaqada beeraha, xoog ahaan wadida iyo fardaha qabyada ah xilliyada qaarkood oo u baahnaa mashiinno dhaqaaqa.
Faras qabyo ah, waxay u baahan tahay xoogaa daryeel gaar ah iyo quudinta iyadoo kuxiran nooca iyo qadarka shaqada inay fuliyaan maalintooda maalin.
Inta badan ee fardaha qabyada ah may jirin ka hor qarnigii XNUMXaad. Waxay ahayd qarnigan baahiyaha militariga iyo beeraha ee qeexayay jinsiyadaha shaqo culus. Marka lagu daro saameynta kacaankii warshadaha, hagaajinta gawaarida iyo mashiinada beeraha.
Kuwaas Wadammadii lahaa marinnada ganacsiga waxay ka heleen adeegyadan cusub ee xoogga leh kuwo waxtar badan leh. Xitaa meelahaas kanaallada leh waxay u adeegsadeen inay awoodda ugu gudbiyaan biyaha iyagoo isticmaalaya xarigga siligga iyo aaladaha farsamada.
Isbaanishka ma jirin faras culus oo qabyo ah ilaa qarnigii XNUMXaad.
1 Noocyada fardaha qabyada ah
1.1 Fardo fara badan oo qabyo ah
1.2 Fardo qabyo ah oo nus-culus ah
1.3 Fardo fudud oo qabyo ah
2 Adeegsiga dhaqameed ee fardaha qabyada ah
2.2 Gaadiidka alaabada iyo dadka
2.3 Fardaha jiido
2.4 Wadista mashiinka
2.5 Shaqada dhirta
3 Noocyada ugu muhiimsan ee fardaha qabyada ah
3.1 Astaamaha guud ee fardaha qabyada ah
3.2 Fardo Ardenes
3.3 Qabyo kareemka Mareykanka
3.4 Faras qabyo ah oo Talyaani ah
3.6 Faras qabyo ah oo reer Beljam ah
3.9 Faraska Breton
Noocyada fardaha qabyada ah
Waan heli karnaa saddex nooc oo faras qabyo ah iyadoo loo eegayo astaamahooda iyo adeegsigooda, labadaba asal ahaan laxiriira: fardaha culus ee culus, fardaha jilicsan ee culus iyo fardaha fudfudud ee fudud.
Fardo fara badan oo qabyo ah
Iyagu waa kuwa ugu waaweyn fardaha qabyada ah miisaanka ilaa 180 cm at engegay. Sidoo kale cabirkoodu waa weyn yahay, culeyskooduna waa 600kg ilaa 1000kg. Kuwa ay addimmadu waa gaaban yihiin, qalfoofkooduna wuxuu ku xoog badan yahay murqaha oo si fiican loo horumariyay. Intaas waxaa sii dheer, waxay badanaa leeyihiin dabeecad aad u deggan.
Qaar ka mid ah noocyada culeyska culus waa: kareemka Mareykanka, Faraska Ardennes, Faraska qabyada ah ee reer Belgium, Faraska Breton, Faraska Percheron, Shire faraska, Faraska Bolognese ama faraska Catalan Pyrenean.
Fardo qabyo ah oo nus-culus ah
Fardaha qabyada ah ee loo adeegsaday gaadiidka sida masraxa isboortiga ayaa sidoo kale u baahday awood deg deg ah. Tani waxay ahayd sababta fardaha culus ee jilicsan aysan gebi ahaanba ugu habbooneyn howlahaan xawaaraha sare leh. Fardaha nus-culus ee fardaha ah waa xayawaan khafiif ah oo ka soo bixi kara roodhida.
Qaar ka mid ah noocyada jilicsan ee jilicsan ayaa ah noocyada iftiinka ee Percheron iyo sidoo kale noocyada iftiinka ee Breton, oo sidoo kale loo yaqaan Breton Postire, fardaha Ardenes.
Fardo fudud oo qabyo ah
Kuwani waa fardaha ugu fudud ee ka mid ah fardaha jilicsan. Waxay caadiyan qabsan jireen hawlo ay ka mid yihiin ku qaadista gawaarida fudud xawaare ka sareeya labadii hore.
Waxaan ka dhex helnaa noocyada noocan ah sida: Morgan ama Hackney.
Adeegsiga dhaqameed ee fardaha qabyada ah
Fardo fara badan oo qabyo ah ayaa loo isticmaali jiray in lagu beero lagana dhaqaajiyo mashiinada beeraha noocyadooda kala duwan ilaa fardo iyo baqlo lagu beddelay horumarka farsamada.
Gaadiidka alaabada iyo dadka
Waxaa lawada ogyahay in xiliyadii kaladuwanaa alaabada lagu qaadi jiray gawaari faras lagusoo qaado. Gawaaridan waxay noqon karaan qaab iyo cabir kala duwan, taas oo u dhiganta, inay lahaayeen hal magac ama mid kale: gaari, gaari, tartata, galley.
Waad ogaan kartaa noocyada kala duwan ee gawaarida lagu jiido fardaha maqaalkeenna: Gawaarida fardooleyda: taariikhda, noocyada iyo adeegsiga
Sida astaamaha ugu muhiimsan waxaan xusidoonaa labo, mid si weyn loogu isticmaalo iyo tan labaad oo xiisaha leh:
Muddo dheer dhaqdhaqaaqyada u dhexeeya magaalooyinka ama magaalooyinka waxaa lagu waday faras. Wadooyinka, oo ku soo beegmay kuwii ay dhiseen Roomaanku, way xumaayeen ama ma jirin. Isticmaalka gawaarida ayaa sii faafayay waxaana la dhisay wadooyin udhaxeeya magaalooyinka waaweyn, iyadoo laga dhisayay khadadka masraxa ee u dhexeeya magaalooyinka waaweyn. Waxay ahayd fardaha qabyada ah ee buuxiyay howsha hogaaminta dacwadahaan.
Magaalada Paris waxaa ka jiray shabakad taraamyada ay jiidaan equines.
Sidii aan hore u soo sheegnayba, magaalooyinkaas lahaa gaadiidka webiga, fardo ayaa door muhiim ah ka ciyaaray. Xayawaanku waxay alaabada ku jiidayeen xadhko lagu beddelayo dadka ama baqalalaha soo jiidan jiray alaabtan ilaa ay ka muuqdaan fardaha qabyada ah
Fardo-faneedka ayaa sidoo kale loo adeegsaday awood ahaan awood u siinta mashiinka ama aaladaha sida golayaasha, mashiinnada, qalabka wax lagu riixo, matoorada biyaha, iwm. Xayawaanku sida caadiga ah waxay ku xirnaayeen winch dhidib ah oo toosan oo xarig ah baararka shucaaca leh. Fardo waxaa loo diyaariyey inay ku socdaan goob goobaabin leh xoogga lagama maarmaanka u ah inay gaaraan awoodda looga baahan yahay hawlgalka mashiinka.
Dhul adag, waa fardaha jilicsan ee jiidaya inay soo jiidaan qoryaha.
Noocyada ugu muhiimsan ee fardaha qabyada ah
Hadda waxaan arki doonnaa qaar ka mid ah tartamada ugu waaweyn ee ka socda fardaha Qabyada ah. Laakiin marka hore waxaan ka hadlaynaa astaamaha guud ee ay leeyihiin fardaha qabyada ah.
Astaamaha guud ee fardaha qabyada ah
Fardo jilicsan ayaa caan ku ah iyaga xoog badan iyo adkaysi. Iyagu waa weyn yihiin, dhaadheer yihiin, egine weyn yihiin, in kastoo sidii aan horay uga soo hadalnayba, ay kuxirantahay nooca faraska qabyada ah ee noocyadu leeyihiin, way ka weynaan doonaan ama ka weynaan doonaan. Waxay ku kala duwanaan karaan 160 cm ilaa 180 cm markay engegaan waxayna u dhexeeyaan 600 ilaa 1000 kg, inkasta oo kuwa qabyada culus ay dhaafi karaan miisaankan ugu dambeeya.
Lafaha fardahaas waa kuwo xoog badan oo waaweyn. Muruqmaalkiisa oo aad u horumarsan. Astaanta madaxu badanaa waa khadad gaaban oo xaraf leh, addimmaduna way gaaban yihiin.
Koofiyaduhu way kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran nooca su'aasha laga qabo, in kastoo ay badanaa leeyihiin jaakad qaro weyn. Noocyada qaar, sida Percherons, waxay leeyihiin hoolashooda timo daboolan.
Sida dabeecaddiisa, waxay ku saabsan tahay xayawaan aad u deggan.
Oo hadda haa, waxaan ka hadli doonnaa afar nooc oo ka mid ah sinnaantaas.
Waxaan nahay ka hor mid ka mid ah faracyada ugu faca weyn fardooleyda. Noocani wuxuu ku dhashaa Ardennes, Belgium, Luxenburg iyo France, kii hore waa halka uu ka helo magaciisa. Si kastaba ha noqotee, taariikhda kuwaani waxay lamid yihiin waxay dib u bilaabatay taariikh badan, ilaa Rome hore. Fardaha Ardennes ama Ardennes waa awoowayaasha inta badan noocyada qabyada ah.
Bilowgooda waxay ahaayeen faras jilicsan halkii ay ka ahaan lahaayeen qaybta culus, laakiin qarnigii XNUMX-aad, taranka ayaa lagu dhex daray fardaha Carabta si loo fududeeyo. Maanta waxaa loo tixgeliyaa sida faras qabow oo semi-culus.
Ahaayeen aad muhiim u ah in la qabto shaqada dagaalka, sida faras qabyo ah iyo fardooley fardooley ah.
Haddii aad rabto inaad wax yar ka ogaato waxyaabahaan waxaad macluumaad ka heli kartaa maqaalkeenna: Faraska Ardennes, waa mid ka mid ah noocyada ugu da'da weyn
Faracani farasku waa faraska kaliya ee qabyada ah ee laga sameeyay Maraykanka maanta jira. Waxay magaceeda ka heshaa kareemkeeda ama shabaqa champagne ee dahabiga ah iyo indhaha indhaha.
Waa nooc ay ku jiraan tijaabooyin aad u yar inkasta oo shaqo la qabanayo si aan loo lumin.
Faras qabyo ah oo Talyaani ah
Es mid ka mid ah noocyada yaryar ee qabyada ah, ugu badnaan waxay gaari karaan 160 cm. Xoog ahaanshaha ka sokow, waa nooc firfircoon oo firfircoon oo loo isticmaalo sidii faras beer. Waxay leedahay fanaaniinta iyo dabada timo cad leh.
Tartankan adkaysiga weyn, waxaan ka heli saddexda nooc ee fardaha qabyada ah: kuwa Latvian-ka culus, kuwa Latvian-ka culus-culus iyo Latvian-ka Latvian-ka fudud.
Faras qabyo ah oo reer Beljam ah
Asal ahaan ka timid Belgium, waa mid ka mid ah noocyada qabyada ah ee la soo saaray si ballaaran looga isticmaalo Mareykanka iyo Kanada. Waxaa loo adeegsaday dhammaan wixii ka sarreeyay dhammaan rarka xamuulka waaweyn.
Noocani wuxuu ka yimid gobolka isla magacaas. Waxaa lagu helay iyadoo la xushay noocyada asaliga ah ee aagga. Waa nooc cimri dheer oo u baahan cunno yar si ay u noolaato. Maanta ma jiraan nuqullo aad u tiro badan.
Tani nooc ka soo jeeda Le Perche, Faransiiska, laguma yaqaan oo keliya inay xoog weyn iyo sharaf laakiin sifooyinka bilicdeeda si aad ah loogu qiimeeyay oo ay dul dhigeen liisas badan oo ah fardaha adduunka ugu quruxda badan.
Si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ayuu u faafayey una qaatay noocyo kala duwan iyadoo ku xiran waddanka ay sii waddo horumarka. Haddii aad rabto inaad ogaato noocyada kala duwan ee ku dhex jira xayawaankan, waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso maqaalkeena: Faraska Percheron
Waxaan wajahaynaa faras kale oo qabyo ah oo ka yimid Faransiiska. Waa nooc la soo saaray Qarnigii XNUMXaad yaase leh a sirdoon weyn. Magaceedu wuxuu ka soo jeedaa buuraha Breton, halkaas oo ay aad u joogeen.
Waa nooc rustic ah, oo socod deg deg ah leh iyo socod xarago leh inkasta oo uu weyn yahay.
Noocan fardaha qabyada ah waa natiijada ka gudubka maraakiibta culus ee Iskotishka iyo fardaha Flemish. Waxaa lagu hagaajiyay iyadoo laga gudbo shire iyo Carab. Waxaas oo dhami waxay ka dhigayaan noocani mid aad u qurux badan.
Astaamaha fardaha Carabta iyo Berber, kani waa nooc aad u weyn oo miisaankiisu yahay (qiyaastii 850 kg). Waa isir si ballaaran loogu isticmaalo shaqooyinka jiidaha oo gaabis ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Fardo jilicsan iyo noocyada ugu matalaya